Codso BILAASHA LACAG LA'AAN AH ee FitFreeze Doomaha - Dib-u-Celinta Lacagta
Bogga ugu weyn » Freebies » Codso BILAASHA LACAG LA'AAN AH ee FitFreeze Doomaha
Wakhti xaddidan oo kaliya waxaad heli kartaa baakad muunad oo bilaash ah oo ah FitFreeze Doomaha Dheecaan! Barafka FitFreeze wuxuu ku badan yahay borotiinka waxayna ku yar tahay kalooriyada iyo sonkorta.
Iyada oo FitFreeze Ice Cream Free Conducted Deal, Waxaad heli doontaa:
2 oo buuxa miisaanka FitFreeze ee labeen shukulaatada ama dhadhanka vanilla
The FitFreeze Book Recipi Book Book sida lacag dheeraad ah oo bilaash ah
Dhamaan waxaad bixisaa adiga FitFreeze Dhiigga Dumarka bilaashka ah waa $ 7.95 maraakiibta. Kareemka laftiisa laftiisu waa 100% bilaash oo kaliya waxaad bixineysaa gaarsiinta albaabka
Jalaatada FitFreeze waxay kaa dhigeysaa mid buuxa, tamar leh oo qanacsan. Ka sokow inay ku badan tahay borotiinka, FitFreeze waxaa sidoo kale lagu rakibaa faybar waana bilaash. Qaadasho ah Jalaatada Fitfreeze 7 garaam oo dhan oo fiber ah oo siddeed jibaar ka badan koobabka isbinaajka! Jalaatadan ayaa ka hooseeya sonkorta celceliska koobkaaga jalaato sidoo kale. FitFreeze waxaa ku jira eber macaaneeye macmal ah waana daaweyn ay qoyskaaga oo dhami jeclaan doonaan! Ma xiiseyneysaa shaybaarkaaga bilaashka ah ee FitFreeze? Riix halkan si aad u hesho maanta